Android Phone ထဲမှာ မြန်မာစာ : U.N.O.B
Administrator | Sep 07, 2011 | Comments 12
Android ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာစာ ဖတ်လို့ရအောင် ဒီလို လုပ်လို့ရပါတယ်။
***Android Phone က Rooted လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။
(၁) Phone ထဲက Android market မှာ Font Changer ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။
(၂) Phone နဲ့ Computer ကို USB ကြိုးနဲ့ချိပ်ပြီး Phone internal Storage or SD card ထဲက .fontchanger Folder မှာ zawgyi-one.ttf font ကို ထည့်ပါ
[Zawgyi Font] ကို ဒီ နေရာမှာပဲ [Download] ယူလို့ရပါတယ်။
(၃) ဖုန်းပေါ်က Font Changer App ကိုဖွင့် Zawgyi One ကို ပြောင်းပြီး Save လုပ်ပါ။
Installing Zawgyi Font and Trouble ...
Tags: android • zawgyi
hla win tun says:
How to rooted the andriod ?
There are too many ways for different models and brands. Find it on YouTube as typing “how to root( your phone )
အကို့လိုမျိုး mac မှာ android ကိုအဲ့လိုမျိုးသုံးချင်ရင်ဘာဆော့ဝဲလ်သုံးပြီးဘယ်လိုလုပ်ရတယ်
Mac မှာ VNC VIEWER ကို ထည့်ပါ၊ ဖုန်းထဲမှာ Driod VNC SERVER APP ကို ထည့်ပါ၊ နှစ်ခုလုံး WiFi တူတာသုံးတဲ့အချိန် ဖုန်းရဲ့ IP နံပါတ်အတိုင်း MAC ပေါ်က VNC Viewer နဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်၊
အကိုခင်ဗျာ..Apple MacBookမှာ gtalk apps download လုပ်လို့မရဖြစ်ပါသည်။ skype ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်..Gtalk apps download လုပ်တာ ဘယ်လိုမှ မရလို့ပါ…ပြုလုပ်နိင်ရင် သိချင်ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
Sorry … Mac အတွက် gtalk မရှိပါ iChat မှာပဲ gtalk account ထည့်သုံးရပါမယ်
A Phyu Yaung says:
Andriod မှာ မြန်မာ လက်ကွက်ကျတော့ရော ဘယ်လို လုပ်ရလဲ မသိဘူး
SMS ပို့တာ ဖြစ်ဖြစ် Contacts သိမ်းတာဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းဆိုင်မသွားပဲ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ကြည့်ချင်လို့ပါ 🙂
1st MM Browser ဆိုတဲ့ App တစ်ခုတော့ ကြားဖူးတယ် ရမရ တော့ မသေချာဘူး၊ Gmail ထဲမှာ contact ကို ဗမာလိုမှတ်ပြီး Sync လုပ်ရင်တော့ ရမယ်ထင်တယ်
အင်တာနက်တော့ အသုံးပြုရမယ် font ကတော့ google ထည်ဝင်ပြီး zawgiy one ttf လို၇ိုပ်ထည်လိုက်ပါ….ပြီး၇င် တွေ၇ပါလိုက်မယ် သူနဲပတ်သက်တာတွေ အဲဒီထည်က Zawgyi One TTF | SlideME နှိပ်လိုက်ပါ ပြီး၇င် Download
Download Zawgyi One TTF တွေလိုက်မယ် ဒေါင်းလုပ် ပုံစံက အနီေ၇ာင်လေးနဲ ဒေါင်းလုပ်ပြီး၇င် ဖုန်းထည်ကိုပြန်သွားပါ ဒေါင်းလုပ်ပြီးသာ zawgyi one ttf ကို install လုပ်လိုက်ပါ ပြီး၇င် ဖုန်း၇ဲ setting ကိုဖွင့်လိုက်ပါ display ကိုဖွင်လိုက်ပါ အဲဒီမှာ font syle ၇ှာပါပြီး ဖွင်လိုက်ပါ တွေပါလိုက်မယ် zawgyi one ttf ကိုေ၇ွးလိုက်ပါ……font only ပါ